‘आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ ‘आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो’
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७७ फागुन १२ गते, १०:४० मा प्रकाशित
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कैलालीको राजपुरमा ५० शैय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापना तथा संचालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । प्रदेशका ७ वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र महाकाली आयुर्वेद औषधालयलाई १० शैय्यामा स्तरोन्नती लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयुर्वेद चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीबाट आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको छ । आयुर्वेद स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखाका आयुर्वेद चिकित्सक डा.चेतराज जोशीसँग हेल्थआवाजका लागि पदमराज भट्टले गरेको कुराकानी :
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत १० वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेका छन् । प्रदेश सरकारको संरचनामा ७ वटा पहाडी जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र २ वटा सेती र महाकाली आयुर्वेद औषधालय रहेका छन् ।
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको लागि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट ३७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ ।
त्यस्तै, संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जुन स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा छैन । प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये २२ वटा स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौं । यो बाहेक हामीसँग ३३ वटा स्थानीय तहमा ३३ वटा आयुर्वेद औषधालय रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्था के छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेका आयुर्वेद चिकित्सालयबाहेक सबै दरबन्दी पदपूर्ति भएको अवस्था हो । तर, आयुर्वेद चिकित्सकको हकमा दरबन्दी पदपूर्ति छैन । अझै पनि ५ वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा ५ वटा आयुर्वेद चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञापन गरी ३ वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा करार सेवामार्फत चिकित्सक पठाएका छौं । २ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आयुर्वेद चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । कविराजको हकमा २ दरबन्दी खाली छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अछाममा वैद्यको १ दरबन्दी खाली छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् ?
आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । संसारमा नसर्ने रोग र मानसिक रोगको जोखिम बढ्दै गयो, यसलाई न्यूनीकरण गर्न आयुर्वेद र योगसँग सम्बन्धित अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिमा पनि प्राथमिकतामा छ । प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको विषय हो । यसैसँग सम्बन्धित कुरा जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि राखेका छौं । प्र्रदेश स्वास्थ्य नीतिमा पनि ल्याउदैछौं । अहिले हामीले प्रदेश सरकार मातहत हाम्रा जति पनि आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था छन् त्यसमा नियमित ओपिडी सेवा संचालनमा छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि रसायन औषधि वितरण गरेको अवस्था छ । स्तनपान गराउने आमालाई ६ महिनासम्म दुधबद्र्धक औषधिहरु दिइरहेका छौं । आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालनका साथै दुर्गम क्षेत्रमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छौं ।
आयुर्वेदसँग जोडिने अर्को मुख्य पाटो भनेको योग हो । योगका कार्यक्रमहरु जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, महाकाली र सेती आयुर्वेद औषधालयमा नियमित रुपमा संचालनमा आएको अबस्था छ । आयुर्वेदको आफ्नै विशिष्टीकृत चिकित्सा पद्धती छ, जसलाई हामी पूर्व कर्म, पञ्चकर्म भन्छौं । यसको मुख्य असर भनेको नसर्ने रोग तथा मानसिक रोगहरुमा राम्रो नतिजा भएको हुनाले यो कार्यक्रम पनि संचालनमा छ । यसबाहेक नीतिगत कुरामा स्थानीय तह प्रदेश तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आयुर्वेद र योग बुझाउन आवश्यक रहेकाले त्यो तहको कार्यक्रम पनि राखेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट रसायन तथा बजारीकरण सम्बन्धि तालिम, पूर्वकर्म/पञ्चकर्म/योग सम्बन्धि तालिम र ट्राफिक प्रहरीलाई योगाभ्यासका कार्यक्रमहरु संचालनमा छन् ।
आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आगामी योजनाहरु के छन् ?
अहिले प्रदेश सरकारको आगामी योजना आयुर्वेदमा तथ्यांक संकलनमा समस्या थियो । आयुर्वेदका तथ्यांकहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा नसमेटिने हुनाले आयुर्वेद विभागले आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एआईएमएस सफ्टवेयर सुरु भएको छ । यसले गर्दा कति बिरामी नियमित रुपमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । फ्लोअपमा कति आउँछन्, यसलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण छ । आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा नपुगेको हुनाले सेवाग्राहीको पहुँच छैन । त्यो स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्साको युनिट स्थापना हुनुपर्दछ भनेर ऐन÷नीतिमा पनि यो कुरा ल्याउन खोजेका छौं ।
आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालन कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता छदैंछ । यतिले पुग्दैन्, अब आम जनसमुदायमा र सामुदायिकस्तरमा जान नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।
क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयद्धारा ९ जना सम्मानित
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना हुँदै